ထိရောက်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာကိုမည်သို့ဖန်တီးရမည်နည်း - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
မတ်လ 5, 2021 မတ်လ 4, 2021 Saba Seo အာရအလွတ်, B2B, စတင်သူများအတွက်အကောင်းဆုံးအလွတ်တန်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ, ဘ‌‌လော့ခ်, စီးပွားရေး, တရုတ်အလွတ်, အသားပေးသတင်းများ, FGG တန်ဖိုးနည်းစျေးကွက်, Freelance Global Gigs (FGG) စျေးနှုန်းချိုသာခြင်း, ပြင်သစ်အလွတ်တန်း Gigs, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလက်ကားအွန်လိုင်း, ဟိန်ဒီအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲ, အင်ဒိုနီးရှားအလွတ်တန်း Gigs, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B, အွန်လိုင်းလက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်, ပေါ်တူဂီအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲ, ရုရှားအလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲများ, B2B အွန်လိုင်းကိုဝယ်ပါ, ကမ္ဘာလုံးဆိုင်, လက်ကားအွန်လိုင်းစျေးဝယ်, စပိန်အလွတ်တန်းဖျော်ဖြေပွဲများ, လက်ကား, လက်ကား - B2B, လက်ကား & B2B စျေးကွက်, လက်ကားစျေးကွက်အွန်လိုင်း ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်း
ဖောက်သည်များကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။ သင်ဘယ်လိုလခရမလဲ ကုန်ပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်စဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသလား။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးတွင်အောင်မြင်ရန်သင်၏ပန်းတိုင်များကို ဦး စွာထားပါ။ အတတ်နိုင်ဆုံးတိတိကျကျကြိုးစားပါ။ လာမည့်ခြောက်လ၊ နှစ်နှင့်ငါးနှစ်အတွက်သင်၏အရောင်းရည်မှန်းချက်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ သင့်ကိုယ်သင်ကဲ့သို့သောမေးခွန်းများမေးပါ -
အောင်မြင်သောရည်မှန်းချက်များချမှတ်ရန်မမေ့ပါနှင့်။ အသေးစားကိုစတင်ပါ၊ သင်၏ရည်မှန်းချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်သည့်အခါသင်၏ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်တည်ဆောက်ပါ ထွက်ခွာသည် ဘဝသိပ္ပံစက်မှုလုပ်ငန်း နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များသည်။
သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ
ထို့နောက်သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်ကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ သင်ကမ်းလှမ်းမည့်အရာတစ်ခုတည်းသာရှိသလား၊ သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်သောစာရင်းလား။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကိုမည်သည့်အရာများ ဦး စားပေးမည်ကိုအာရုံစိုက်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုသည်ဝယ်လိုအားရှိပါသလား။ ဖောက်သည်များကိုဘယ်မှာရှာရမလဲ။ သင်ဘယ်လိုလခရမလဲ ကုန်ပစ္စည်းများကိုသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်စဉ်းစားရန်လိုအပ်ပါသလား။
အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်၏ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုသုတေသနလုပ်ရန်သတိရပါ။ သင်၏ပြိုင်ဆိုင်မှုသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးတွင်မည်သည့်နည်းများဖြင့်အောင်မြင်နေသနည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယှဉ်ပြိုင်မှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်းကို ဦး တည်သွားရန်ကျွန်ုပ်တို့တွင်အကြီးမားဆုံးသင်ယူရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာကိုပိုမိုနားလည်ရန်စျေးကွက်အမျိုးမျိုးကိုလေ့လာကြည့်ပါ။
ကမ္ဘာအ ၀ ှမ်းရှိကုန်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်သူများ၏ကျွမ်းကျင်မှုများကိုအသုံးချရန်မကြောက်ပါနဲ့။ US Commerical Service သည်သင်၏အကျိုးအတွက်နိုင်ငံ ၇၅ နိုင်ငံရှိသံရုံးများရှိကောင်စစ်ဝန်တစ်ရာကျော်ကိုကမ်းလှမ်းထားသည်။ ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏အောင်မြင်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းအတွက်အမေရိကန်ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဘဏ်နှင့်အသေးစားစီးပွါးရေးအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
သင်၏ဖြန့်ဖြူးရေးမဟာဗျူဟာကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ နိုင်ငံခြားစျေးကွက်အသစ်တခုကိုစူးစမ်းလေ့လာချင်လား၊ သင်မည်သည့်ရွေးချယ်မှုမဆို၊ 95 ရာခိုင်နှုန်းကို ယူအက်စ်ပြင်ပတွင်နေထိုင်သောကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစားသုံးသူများအနက်
ဝယ်လိုအားနှင့်အမြတ်အစွန်းဘယ်မှာစဉ်းစားပါ။ သင်ကြုံတွေ့ရမည့်စီးပွားရေးအခြေအနေအတက်အကျနှင့်သင်၏အမြတ်အစွန်းအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်ကိုစဉ်းစားပါ။ မဟာဗျူဟာစာရွက်စာတမ်းတစ်ခုစုဆောင်းရန်သတိရပါ။ သင်နှင့်သင်၏အဖွဲ့ကိုလမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်စေရန်သင်၏အဖွဲ့အစည်းကိုရှေ့ဆက်သွားရန်သင်၏အစီအစဉ်များကိုရေးချပါ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေးမဟာဗျူဟာသည်နိုင်ငံတကာစေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုများတွင်အောင်မြင်သောအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? သင့်ရဲ့အနာဂတ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီးပွားရေး၌စောင့်ဆိုင်း! ဤကဲ့သို့သောပို့စ်များကိုပိုမိုကြည့်လိုပါသလား။ အရာအားလုံးအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်၏ကျန်စစ်ဆေးပါ ...
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂူဂဲလ်ရှာဖွေမှုတွင်ကောင်းမွန်သောစာမျက်နှာရာထူးနှင့်ဒိုမိန်းခွင့်ကိုရရှိရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေသည့်ဆက်နွယ်သောအချိတ်အဆက်များတည်ဆောက်ရန်သင့်အားကူညီပေးသည့် guest ည့်သည်စာတိုက် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်။